Natraygroup | ❤ Happy Father’s Day ❤
❤ Happy Father’s Day ❤
Posted by natray natray | June 21, 2016	| PROMOTION |
ချစ်ခင်ရပါသော Customer များ ခင်ဗျာ…လာမယ့် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ဟာ Father’s Day ဖြစ်ပါတယ်… လူတိုင်းမှာ အဖေ ရှိကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါဟာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးပါ…
သားသမီးတို့ ဘဝအတွက် သူရဲကောင်း တစ်ဦးပမာ ရှေ့ မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်ကာ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်လာတဲ့ ဖခင်တို့ရဲ ဂုဏ်ကို ချီးမွမ်း ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့နေ့ဖြစ်တာမို့ ဘယ်သောအခါမှ နေမဝင်သော ဖခင်မေတ္တာတရား အတွက် အဖေ့ ပါးတစ်ဖက်ကို နမ်းရင်း အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုခု ရွေးချယ် ဝယ်ပေးကြရင် မကောင်းဘူးလား ခင်ဗျာ….
အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်မွန်တွေ အတွက်ကတော့ မပူပါနဲ့ ….
Casabella မှ Father’s day အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ အထူး လျော့ဈေး Promotion တွေ ရှိနေပါတယ်…..
 အနင်းအနှိပ် ကြိုက်တဲ့ အဖေ့အတွက် အညောင်းအညာပြေပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေမယ့် အနှိပ်ခုံလား ???
 ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့ အဖေ့အတွက် အိမ်မှာနေရင်း ပြေးလို့ ရမယ့် ပြေးစက်လား???
 တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းလာတဲ့ အဖေ့ကို အကောင်းဆုံး အိပ်စက် အနားယူခွင့် ရစေမယ့် အိစက်တဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် မွေ့ယာလား ???
 ဇိမ်ကျကျ ထိုင်ပြီး TV ကြည့်ရတာ ကြိုက်တဲ့ အဖေ့အတွက် ခြေထောက်ပါ relax ဖြစ်စေမယ့် Relax Chair လား ???
 ရုံးမှာ အလုပ်များတဲ့ အဖေ့ကို သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ခန့်ခန့်ကြီး ဖြစ်စေမယ့် ရုံးခန်းသုံး Chair လား ???
အများကြီး မစဉ်းစားဘဲ သင့် ဖခင် အတွက် ပစ္စည်းကောင်းတွေ အစုံအလင်ရှိတဲ့ Casabella ကိုသာ ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ခင်ဗျာ….
သိတတ်တဲ့ ကျေးဇူးတရားနဲ့ ဖခင်ရဲ့ အပြုံးကိုခြွေမယ့် သားသမီးတိုင်း အတွက် Casabella မှ Father’s Day အထူး Promotion ကို ဇွန် လ (၁၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဇွန် လ (၂၆) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ….။
Coming 19th June is Father’s Day.
Please honour your Dad for what he has done with purest love.
Show your love giving special gifts to your beloved Dad.
We are ready to celebrate the special day of fatherly love, offering Father’s Day special promotion. Please come and visit to Casabella for choosing the best gifts to your Dad.
The promotion is from 11th June to 26th June 2016.
Happy Father’s Day to you again!
Casabella Home Furnishing Center
Yangon : 22, Pyay Road ,9Mile, Yangon. (Tel : 01- 664363, 660769)